♪ Samsung Galaxy Note6ကိုလာမယ့် သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည် ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
♪ Samsung Galaxy Note6ကိုလာမယ့် သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်မည် ♫
Monday, June 06, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Samsung ရဲ့ အဓိကစမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Galaxy Note6ဖုန်းကို လာမယ့် ကြဂုတ်လအစောပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်သွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Galaxy Note6အတွက်အချက်အလက်တွေကို Tipster ဖြစ်တဲ့ Evan Blass က လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Galaxy Note7လို့ ခေါ်ဆိုသွားဖွယ်ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်းမှာဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။
တကယ်လို့ ဒီသတင်းအတိုင်းသာမှန်ခဲ့လို့ရှိရင် Samsung ဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းကို ဒီနေ့ကနေ နှစ်လအကြာ သြဂုတ်လ ၃ရက်နေ့ပွဲမှာ မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့မှာ ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မယ့်ရက်တွေထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အတူ၊ Galaxy Note6အတွက် အချက်အလက်တွေလည်း ထွက်လာခဲ့ပြီး ဒီ Phablet အမျိုးအစား ဖုန်းအနေနဲ့ ၅.၈လက်မအကျယ် QHD မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 820 SoC နဲ့ 6GB ရှိတဲ့ Internal RAM တို့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မမ်မိုရီအနေနဲ့ 32 GB Inbuilt Storage ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး microSD ကဒ်နဲ့ မမ်မိုရီပမာဏကို ထပ်မံချဲ့ထွင်နိုင်မှာပါ။ ကင်မရာကတော့ 12MP ရှိတဲ့ကျောဘက်ကင်မရာ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
Note6အနေနဲ့ Edge (မျက်နှာပြင်ကွေး) ဗားရှင်းကိုလည်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိနေပြီး၊ Samsung အနေနဲ့ Note5မှာ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကွေး ပုံစံကို စတင်ပါဝင်စေခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ်ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ မျက်ကြည်လွှာကိုဖတ်မယ့် (Iris Sacnner) လုံခြုံရေးစနစ်၊ ရေစိမ်ခံတဲ့ နည်းပညာနဲ့ Android N ဗားရှင်း OS စနစ်အသစ်တို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Samsung Galaxy J7 (2016) Model အားလုံးကို Root ဖေါ...
Android ဖုန်းတွေမှ Virus ကို ရှင်းထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ...
Android Version 5xx အတွက် မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းများကို အချိန်နဲ့တပြေး...
Android Pattern , Pin Lock များကိုဖြုတ်နိုင်မဲ့ To...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထိန်းသိ...
Samsung နှင့် Zapya
၄ ဒေါ်လာတန်၊ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအနည်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကို ယခုတ...
ဗီယက်နမ်အလှမယ် ငုရင်ထရန်ဟုရန်မေ ရွှေတိဂုံစေတီသို့ သ...
ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ Android Virus
Sleep Paralysis ဘီလူးစီးခြင်း
Mi ဖုန်းတွေအားလုံးအတွက် XIAOMI TWRP FLASHER (1Clic...
Phone Bill အလကားရတဲ့နည်း နှင့် Online ငွေရှာနည်း (...
ဓာတ်ပုံ လေးကို ပုံအရှင်လေးတွေပြုလုပ်နိုင်မယ့် Gif...
Browser ဖွင့်တိုင်း ကြော်ငြာတွေ တက်တက်လာတွေကို ရှင...
MPT မှ ဘီလ်ဖြည့်သွင်းသူတွေအတွက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ...
OPPO ကထူးခြားကောင်းမွန်သည့် 4G စနစ်သုံး A37 ဖုန်ြး...
Backup & Clone Firmware နှင့် Error ကင်း Firmware ...
+18 လူသားစား သွေးစုက် ဖုတ်ကောင် ဇာတ်ကားလေးပါ Nina ...
Samsung Galaxy S7, S7 Edge ကို Root ဖေါက်ပြီး မြန်...
အူရီဒူးမှ အင်တာနက်လက်ဆောင် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည့် ...
Female War - Lousy Deal (2015)+18- HD [Part 2]
Female War - Lousy Deal (2015) +18-HD [Part 1]